को हुन् महाकुलुङ गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार सुर्य बहादुर कुलुङ ? – Himshikharnews.com
को हुन् महाकुलुङ गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार सुर्य बहादुर कुलुङ ?
१९ बैशाख २०७९, सोमबार ०८:५४
सुर्य बहादुर कुलुङ, नेपाली कांग्रेस सोलुखुम्बुका यूवा नेता । जो कहिल्यै थाकेनन् । २०५१ सालबाट नेविसंघको विद्यार्थी राजनीतिबाट नेपाली कांग्रेसको यात्रा शुरु गरेका कुलुङ २०५६ आरआर क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा इकाई सदस्य बने । २०५७ सालमा सोलुखुम्बु जिल्लाको नेविसंघ अध्यक्ष भए । दुई बर्षे पहिलो कार्यकालको नेतृत्वपछि दोस्रो कार्यकाल पनि सर्वसम्मत दोहोरिए ।
२०६३ सालमा नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य बनेका कुलुङ पदम बहादुर राई सभापति रहेका बेला जिल्ला सदस्य भएर पार्टीमा काम गरे । प्रभुराम बस्नेतको सभापतित्वकालमा सह–सचिव बनेर जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछिका बर्षमा पार्टी भित्रको विभिन्न पदमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्प्रर्धा जनाएका कुलुङ अहिले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट महाकुलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । उनी वर्तमान जिल्ला समितिमा मनोनित सदस्य समेत हुन् ।
उम्मेद्वारी दर्तासँगै जनताको घरदैलोमा मत माग्न व्यस्त कुलुङ यो पटक महाकुलुङमा कांग्रेसका उम्मेदवारको जित सुनिश्चित भएको बताउछन् । टिकट वितरणका समयमा जो जसरी जहाँबाट लागेपनि महाकुलुङमा कांग्रेस एक भएर चुनाबी तयारीमा लागेको उम्मेदवार कुलुङले बताए ।
उनले भने, ‘पार्टी भित्रबाट म लगायत भलाकाजी कुलुङ र पर्खिधन नाछिरिङ अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षि थियौ । टिकटका लागि दाबेदारी गर्दै गर्दा जस्ले पाएपनि महाकुलुङ पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन लाग्ने सहमति अनुसार नै सँगसँगै जनताको घरदैलोमा भेटघाटमा व्यस्त छौँ ।’
गाउँपालिका अध्यक्षका दाबेदारी मध्यका एक पर्खिधन नाछिरिङ महाकुलुङ १ बुङको वडाअध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् भने भलाकाजी कुलुङ उम्मेदवार बनेका सुर्य बहादुर कुलुङसँगै चुनाबी प्रचारमा सँगै गाउँ टोल पुगेका छन् । ‘यो पटक महाकुलुङको चुनाबी परिणाम कांग्रेसको पक्षमा आउँछ । त्यसमा हामी ढुक्क छौँ । कांग्रेस एक बनेर चुनाबी प्रचारमा छौँ ।’उम्मेदवार कुलुङले भने ।’
महाकुलुङमा कांग्रेसले निकटतम प्रतिस्प्रर्धी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई लिएको छ । एक कार्यकाल स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका सागर किराँती आफैँ दोस्रो पटक अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन् भने नेकपा एमालेबाट पत्रकार भक्त राई चुनाबी मैदानमा होमिएका छन् । तीनै दलका उममेदवारले जितको दाबी गरेपनि गाउँघर डल्दा यो पटक कांग्रेसले बाजी मार्ने संकेत देखेको अध्यक्षका उम्मेदवार कुलुङले बताए । उनले भने, ‘हामी प्रतिस्प्रर्धी ठानेको पार्टी माओवादी केन्द्र हो । उहाँहरुले यसअघि नेतृत्वमा रहेकाले कामबाट असन्तुष्ट मतदाता बाक्लो रुपमा भेटेका छौ । ती मतदाताको मत कांग्रेसको उम्मेदवारको पक्षमा आउने देखिन्छ ।’
२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सागर किराँती अध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसबाट विपना कुलुङ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । किराँतीले १४१० मत ल्याउदा कांग्रेसका भलाकाजी राईले १३८३ ल्याएका थिए । भलाकाजीले भन्दा सागरले ३७ मत बढि ल्याएर चुनाबी परिणाम आफ्नो पोल्टामा पारेका थिए । त्यसबेला एमालेका नरेन्द्र बहादुर राईले ११४२ प्राप्त गरेका थिए । उपप्रमुखमा कांग्रेसकी विपना कुलुङले १३६४ मत ल्याउदा माओवादीकी झरना किराँतीले १२६८ र एमालेकी शुभधनी राईले १२४१ मत पाएकी थिईन ।